काे बन्ला धरान उपमहानगरपालिकाकाे मेयर ?::mirmireonline.com
काे बन्ला धरान उपमहानगरपालिकाकाे मेयर ?
धरान, २५ भदाै । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा चुनावी माहाेल तातेकेा छ । अहिले सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेदवारबिनै चुनावी अभियानलाई जनतामाझ पुर्याउन थालेका छन् । साना दलहरूको गतिविधि शून्य प्राय छ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले जनमुखी काम गर्न नसकेको भन्दै उपनिर्वाचनमा साना दलहरूको समर्थनमा कांग्रेसले साझा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। ०७४ असार २० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा धरान उपमहानगरको मेयरमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बाले कांग्रेस उम्मेदवार तिलक राईलाई पराजित गरेका थिए। ०७५ साउन १ गते मेयर सुब्बा र धरान–७ का अध्यक्ष भुवन मोक्तानको निधन भएपछि धरान नेतृत्वविहीन छ। यो उपनिर्वाचनमा प्रमुख दल नेकपा र कांग्रेसले मात्र उम्मेदवारी दिने गरी चुनावी अभियान गरिरहेका छन्।
तत्कालीन एमाले–माओवादी एकतापछि कांग्रेस अन्य साना दलसँग गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले तेस्रो ठूलो दल समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय लिम्बूवान पार्टी, राप्रपा र राजपासँग गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिने तयारी गरेको छ। कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले उपनिर्वाचनमा साना दलसँग गठबन्धन गरी नेकपा उम्मेदवारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए। उनले ०४८ सालदेखि नेकपाले लगातार जिते पनि नगरको विकासमा उल्लेखनीय काम नगरेकाले यसपाली गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धामा जान साना दलसँग छलफल भैरहेको बताए।
समाजवादी पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले नेकपाबाट जितेकाले विमानस्थल र बसपार्क निर्माण, सडक विस्तार, खानेपानी समस्या समाधान नगरेकाले धरानलाई नेतृत्व दिनसक्ने उम्मेदवार चयन गरेर कांग्रेसलगायत दलसँग चुनावी एकता गर्न लागिएको बताए। संघीय लिम्बूवान पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष अमर इजमले कांग्रेसले धरानमा मेयरको गतिलो उम्मेदवार चयन गरे आफ्नो पार्टीले सर्मथन गर्ने बताए।
नेकपा धरानका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले भने साना दल मिल्दैमा नेकपालाई केही फरक नपर्ने बताए। उनले पूर्व एमाले–माओवादी एकता नै उपचुनाव जित्ने मुख्य आधार भएको दाबी गरे।